सावधान ! आज सुवासले झुक्याए, भोली…….! – Gulmiews
सावधान ! आज सुवासले झुक्याए, भोली…….!
July 19, 2016 Raju Gautam
गुल्मी, साउन ४ । सदरमुकाम तम्घासमै खोलाले बच्चा बगायो । कस्तो सुन्दै अनौठो तर सत्य । घटना यो नौलो होइन । एक बर्ष अगाडी त्यहि नजिकै डुवेर एक बालको ज्यान गएको थियो । केहि पुराना व्यक्तिहरुले अझ पहिलेका घटना पनि त्यो शोकाकुल भीडमा सुनाउँदै थिए । दिउँसो एक्कासी परेको बर्षा सहजै धेरैले कुनै दुखद घटनाको कल्पना मनमा लिएका थिए ।
केहि समयमै आदर्श बिद्या आश्रममा कक्षा ४ मा अध्ययन गर्ने १० बर्षे बालक सुवास भण्डारीलाई खोलाले बगाएको खवर आयो । उनका बाबा आमा घटना लगत्तै अचेत जस्तै थिए । घटना स्थल आदर्श चोकमा जम्मा भएका हजारौ व्यक्ति स्तब्ध एवं शोकाकुल बने । त्यो भीडमा दुख त थियो नै, तर घटनाले एउटा सन्देश पनि बोकेको थियो । घटना घटेपछि मात्र आफ्नो बालबच्चा सम्झेर चुकचुकाउने तर अरु बेला कुनै वास्ता नगर्ने अभिभाकले सुबासको पीडादायी घटनाबाट गत्तिलो पाठ सिक्नुपर्नेछ । सदरमुकामा बच्चा पढाउने बहानामा कोठा लिएका आमाहरु दैनिक थपिएका छन् ।
बिहान १० बजे बच्चा बोर्डिङ्ग छोड्ने र बेलुका ४ वा ५ बजे बच्चा लिन बोर्डिङ्ग गेटमा पुग्ने ती आमाहरुको दैनिकी हो । तर बिहानको भन्दा बेलुकाकोदैनिकी बिगार्ने आमाहरुको कारण मुसलधारे पानीमा भिज्दै र रुदै, कोठामा चाँपी लगाएर मम्मी नभेटिएपछि बिद्यालय पोशाकमै साँझ सम्म गल्लीमा भुल्ने, छिमेककोमा डुल्ले बालबालिका पनि भेटिन्छन् । त्यस्ता आमा र अन्य परिवारले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा बुझ्नुपर्छ । जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ, जीवनको प्रत्येयक सेकेण्डमा जोखिम छ । साँझ त्यो भीडमा पनि केहि आमाहरु दिवंगत बच्चाको विभत्स तस्विरसंग आफ्ना सन्तानको तुलना गर्ने र झस्कने गर्थे । त्यो मुर्खता थियो । पछि रुनुको अर्थ र मुल्य छैन्, समयमै सचेत रहनुपर्छ । तम्घासको बजारमै कतिपय यस्ता तस्विर भेटिन्छन् अनि देखिन्छन् । साँझ वा बिदाको दिन बाबा आमा मस्त गफ गर्दै बजार चर्हाछन्, बच्चा बच्ची साइडमा चल्दै र खेल्दै । कतिपय बाबा आमाकै आँखा अडागी बच्चा दुर्घटनामा परेका छन् ।
तम्घासका अधिकाँश बालबालिकाको क्रिकेट मैदान व्यस्त सडक हो । शनिवार, अरु बिदाको दिन वा बिहान साँझ धेरै बालबालिका सडकमै रमाईरहेको देख्न पाइन्छ । पटक पटक बाइकले उडाइदिएको सुनेकै छौ । साँघुरो र व्यस्त सड्क त्यहि माथी सके सम्म बजार थर्काउने र बाइक दौडाउने यो शहरका डनहरुको पुरानो दादागिरी हो । बाडी, पहिरो र खोलाको बरु मौषम होला तर बाहै्रमासे यो प्रवृति खै सुध्रिएको ? महत्वपूर्ण सवाल हो यो । हामी कोठामै बसेर बच्चालाई पसल पठाउँछौ । बच्चा सधै हतारमा दौडिन्छ, त्यो उसको बाल प्रवृति हो । हामी पनि बच्चा छिटो पुग्छ र आउँछ भनेर काम लगाउने गर्छौ । दौडेर बाटो काट्दा तम्घासमा थुपै्र दुर्घटना भएका छन् । हामी जहिले अरुलाई दोष लगाएर उम्कने र ठुलो मान्छे बन्ने हठ भएका मान्छे हौँ । तम्घासका केहि त्यस्ता होटल र स्थानहरु छन् जहाँ ११÷१२ बर्षे बालकहरुले आफ्नो जीवन चुरोट र गाँजाको धुवाँमा उडाइरहेका भेटिन्छन् ।
जिल्लाकै प्रतिष्ठित बाबा आमा र साहु महाजनका छोराछोरी जो स्कुल र क्याम्पसकै पोशाकमा दिनमा प्याकेटका प्याकेट चुरोट र गाँजा सक्छन । यो प्रवृति अभिभावकलाई पत्तो हुन्न वा चासो लिदैनन् । लतले एक दिन दुर्घटना निम्त्याउँछ, बल्ल अभिभावक झस्कन्छन् वा तर्सन्छन र भन्छन् भोलीबाट यो दोहोराउन दिन्न । तर प्रवृति परिवर्तन भएको छैन् । ख्याल गर्नुस आज बच्चा बगेछ, भोली बगाइदिन सक्छन् । आज आदर्शचोकको भीड एउटा परिवार आफ्नो सन्तानको बियोगमा मुर्छित थियो, भोली अर्को चोकमा अर्को परिवार…………..। दिवंगत आत्माको बैकुण्ठबासको कामना साथै शोकाकुल परिवारमा हार्दिक समवेदना ।
थैलीको मुख राम्रो संग बन्द गरे कसैलाई दोष लगाउनु पर्दैन ।
सवैमा चेतना भया ।।
Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	July 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	पहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन